‘सबै प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेरै देखाउँछौं : महासचिवका उम्मेदवार छविराज पोख्रेल ’-Setoghar
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव पदका उम्मेदवार पोख्रेल सँगको विस्तृत अन्तरवार्ता
छविराज पोख्रेल, महासचिव पदका उम्मेदवार, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल
यतिबेला नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा आवद्ध सदस्यहरु यतिबेला २ पक्षमा विभाजित भएका छन् । एउटा समूहको रुपमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपाल चुनावी मैदानमा खटिएको छ भने अर्को समूहको रुपमा अहिलेको लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने इन्जिनियरहरुको समूह छ । यसै सम्बन्धमा अहिलेको निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन पश्चात् इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गर्नुपर्ने कार्यहरु र अबको कार्यदिशा लगायतका विषयहरुमा रहेर प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालबाट महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका र्इं छविराज पोखे्रलसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका पोख्रेलले अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गर्नुपर्ने कामहरुलाई विभिन्न प्राथमिकताको आधारमा हामीले तय गरी निर्धारित २ बर्षमा सम्पन्न गर्नेमा प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । ऊहाँका अनुसार निर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो वैठकबाट नै इन्जिनियरहरुको वीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरिने, इन्जिनियरहरुको न्यूनतम मासिक तलबमान वृद्धि र निश्चित मापदण्ड तय गर्ने लगायत अन्य थुप्रै कामहरु अघी बढाइने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएनको ३२ औं निर्वाचनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ, निर्वाचनको तयारी कसरी हुँदैछ ?
अहिले हामी ३२ औं कार्यसमिति निर्वाचनको सङ्घारमा छौं । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन नेपालका सबै इन्जिनियरहरुको छाता सङ्गठन हो । विगतका नेृतत्वले नेपालका सबै इन्जिनियरहरुलाई समेटेर लैजाने कार्यमा अबको नेतृत्वले विशेष रुपमा काम गर्नुपर्नेछ । अहिले हामी चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रममा छौं । नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन अन्तरगत अबको नेतृत्वको लागि चितवनबाट शुरु गरेको यात्रा निकै सत्साहपूर्वक काठमाडौं सम्म आइपुगेको छ । जुन हाम्रो लागि हौसला मात्र नभई हामी प्रतिको विश्वास र निर्वाचनमा विजयी हुने आधारको रुपमा हामीले लिएका छौं ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको अबको निर्वाचनमा तपाईंहरुका एजेण्डाहरु के–के छन् ?
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका निम्ति हामीले अब यस क्षेत्रको सुधारको निम्ति निकै धेरै कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको निर्वाचन मार्फत २ बर्षको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कामहरु ८ क्लष्टरमा ३२ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रसाथ सार्वजनिक गरेका छौं । यी सबै कार्यहरु हामीले २ बर्षको अवधिमा नै पूरा गर्न सक्ने किसिमका नै छन् ।
एसोसिएसनमा सक्षम र जागरुक नेतृत्वको आवश्यकता किन रहन्छ ?
वास्तवमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र निकै नै सम्माननीय क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको सम्मान र इज्जत कायम गर्ने दायित्व समेत हाम्रै काँधमा छ । जब मुलुकमा इन्जिनियरहरुले सुरक्षित र सन्तुष्टिको आभास गर्न सक्छन्, तब मात्र मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा नेपालमा गाउँपालिका, नगरपालिका हुँदै समग्र मुलुकलाई सही दिशा दिनको निम्ति इन्जिनियरहरुको विशेष भूमीका रहन्छ । मूलूकलाई सही दिशामा लैजानको निम्ति इन्जिनियरहरुको भूमीका विशेष महत्वपूर्ण रहने भएको हुनाले नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको वृहत्तर हितको निम्ति अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा सही तवरले काम गर्न सक्ने जागरुक नेतृत्वको आवश्यकता छ । जुन नेतृत्व लिन हामी तयार छौं ।
तपाईंहरुले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरु के–के छन् ? ती कामहरु कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ?
हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गर्नुपर्ने कामहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा अघी बढाउने आधार अहिले नै कोरिसकेका छौं । हामीले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा संलग्न रहेका इन्जिनियरहरुको वीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ पहिलो बैठकबाट नै पारित गर्नेछौं । यसैगरी इन्जिनियरहरुको न्यूनतम मासिक तलबको निश्चित मापदण्ड तय गर्नको निम्ति पहल गर्नेछौं ।
जब मुलुकमा इन्जिनियरहरुले सुरक्षित र सन्तुष्टिको आभास गर्न सक्छन्, तब मात्र मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ ।
अहिलेको अवस्थामा इन्जिनियरहरुको तलब नेपाल सरकारको ७ औं तहको कर्मचारी भन्दा कम हुनुहुँदैन । यसैगरी नेपालमा इन्जिनियरिङ पेशालाई मर्यादित बनाउनको निम्ति अहिले सम्म इन्जिनियरिङ सेवा ऐन नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै उक्त ऐन तय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति समेत पहल गर्नेछौं । यसैगरी हामीले आम इन्जिनियरहरुलाई जागिरे मानसिकताबाट उद्यमशिल मानसिकतामा लैजाने किसिमले प्रशिक्षित गर्नेछौं । यसको लागि आगामी २ बर्षको अवधिमा नेपालका ७ ओटै प्रदेशहरुमा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नेछौं । यसैगरी हामीले नेपालमा रहेका इन्जिनियरहरुको सक्रियतामा नै उनीहरुसँग रहेको पुँजी परिचालन गरी जलविद्युत आयोजना निर्माणको निम्ति समेत काम गर्नेछौं । जसले गर्दा नेपालका इन्जिनियरहरुलाई आफैंले उद्यमशिल क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् भन्ने किसिमले यस्तो पहल गर्न लागेका हौं ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको निर्वाचन मार्फत २ बर्षको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कामहरु ८ क्लष्टरमा ३२ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रसाथ सार्वजनिक गरेका छौं । यी सबै कार्यहरु हामीले २ बर्षको अवधिमा नै पूरा गर्न सक्ने किसिमका नै छन् ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेका इन्जिनियरहरुलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्नको निम्ति वातावरण तयार गर्ने काममा यस संस्थाले निकै महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्नेछ । अबको २ बर्षको अवधिमा हामीले यस संस्थालाई नेपालका इन्जिनियरहरुको अभिभावकको रुपमा काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कार्यको निम्ति निरन्तर रुपमा लागिरहनेछौं । हामीले इन्जिनियरहरुको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको निम्ति पनि काम गर्न चाहन्छौं ।
इन्जिनियरहरुको क्षमता अभिवृद्धि, चेतना जागरण र नेतृत्व विकासको निम्ति तपाईंहरुको नेतृत्वले गर्ने महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन सक्छन् ?
इन्जिनियरिङ क्षेत्र सधैं नयाँ कुराको अध्ययन र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गर्ने क्षेत्र समेत हो । यसैकारण हामीले नेपालमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको परिकल्पना समेत गरेका छौं । नेपालमा जसले निकै लामो समय इन्जिनियरिङ क्षेत्र अन्तरगत विधागत रुपमा जसले फरक तवरले काम गर्नुभएको छ, ऊहाँहरुको निम्ति पनि विभिन्न तवरले सहयोग पुग्ने योजनाहरु ल्याएर ऊहाँहरुको सेवानिवृत्ति पश्चात्को अवधिमा ऊहाँहरुले भोग्नुभएको अनुभव र ज्ञानलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको निम्ति पनि विशेष प्रभावकारी तवरले काम गर्नेछौं । यो काम इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजबाट हुनेछ भने नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले यसको संयोजन गर्नेछ ।
नेपालमा अहिले २ ओटा समूहहरु निर्वाचनको मैदानमा छौं । जस मध्ये लोकतान्त्रिक समूहले २९ पटक सम्म निर्वाचित हुँदा पनि व्यवसायी साथीहरुलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । उसँग कुनै कार्यदिशा नै छैन । अर्कोतिर हामी छौं । हाम्रा कार्ययोजनाहरु स्पष्ट छन् । हामी संगठनको हिसाबले व्यवस्थित छौं । योजनाको हिसाबले पनि सशक्त छौं । अहिलेको राज्य पक्षसँग समेत हाम्रो निकटतम सम्बन्ध छ । यसकारण यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दा हाम्रो जीतको सुनिश्चितता छ ।
नेपालका विद्वत् वर्ग मार्फत नयाँ पुस्तालाई आधुनिक तालिम दिनको निम्ति काम गर्ने र स्टाफ कलेजको वरीपरी नयाँ–नयाँ अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुरा आम इन्जिनियरिङ समाज र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी इन्कुरेसन सेन्टरको विकास गरिनेछ । जसले गर्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा नयाँ कुराहरु अध्ययन अनुसन्धान गर्ने परम्पराको विकास हुनेछ ।
हामीले नेपालमा रहेर काम गरिरहेका इन्जिनियरहरुको कार्यदक्षता र योगदानको मूल्यांकनको आधारमा उनीहरुको तह वृद्धिको लागि विभिन्न छोटो तथा लामो अवधिका तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं । यसको लागि स्वदेशी तथा विदेशी क्षमतावान् व्यक्तिहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछौं ।
भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई बढाएर ४ लेनको बनाउनको निम्ति कार्य अघी बढाउँदैछ । शहरी क्षेत्रमा सडक ८ लेनको बनाउने, उत्तर दक्षिण बाटाहरु खोल्ने, द्रुतमार्ग निर्माण, रेलमार्ग निर्माणको निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कामहरु अघी बढेका छन् । समुद्री सतहले नछोएको नेपालमा पनि पानीजहाजको कुरा अघी बढाइएको छ । यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा नेपाल अब विकासको दृष्टिले निकै अघी बढ्ने क्रममा छ ।
नेपालमा अहिले पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको कुरालाई लक्षित गर्दै हामीलाई अब कस्तो तवरको इन्जिनियरिङ जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसैको आधारमा इन्जिनियरिङ जनशक्ति उपलब्ध गराउने किसिमले काम अघी बढाउनेछौं ।
समृद्ध मुलुक निर्माणको निम्ति अबको नेतृत्वबाट के आशा गर्न सकिन्छ ?
हामीले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा नेपाललाई अब पूर्वाधार विकासको दिशामा अघी लैजानुपर्छ भन्ने किसिमले त्यस किसिमको वातावरण तयार गर्नको निम्ति समेत पहल गर्नेछौं । नेपालमा पुर्वाधार विकासलाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु अहिले एकै ठाऊँमा आइसकेका छन् । मात्र यसको निम्ति समन्वयनकारी तवरले काम हुन सकेको छैन । त्यो काम अब निर्वाचित नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको नेतृत्वले गर्नेछ ।
हामीले नेपालका इन्जिनियरहरुलाई उच्च मनोबलको साथ नेपाल सरकारसँग समेत काँधमा काँध मिलाएर अघी बढ्ने किसिमले समेत काम गर्नेछौं । यसको निम्ति हामीले नेपाल सरकारले विभिन्न निकायहरु मार्फत जारी गरेका विभिन्न श्वेतपत्रहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने किसिमले समेत काम गर्नेछौं । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईं मन्त्रालयले ३ बर्षमा ३ हजार मेघावाट, ५ बर्षमा ५ हजार मेघावाट र १० बर्षमा १५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी अन्तरदेशिय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्य, ठूला ३ ओटा अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य, प्रशस्त मात्रामा विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउनको निम्ति पहल गर्ने कार्यहरुलाई समेत विशेष रुपमा अघी बढाउन हामीले पहल गर्नेछौं । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा विमानस्थलहरु निर्माणको क्रममा छन् । भैरहवा विमानस्थल सम्पन्न हुने क्रममा छ । पोखरा र निजगढ विमानस्थल निर्माणको चरणमा गएका छन् । भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई बढाएर ४ लेनको बनाउनको निम्ति कार्य अघी बढाउँदैछ । शहरी क्षेत्रमा सडक ८ लेनको बनाउने, उत्तर दक्षिण बाटाहरु खोल्ने, द्रुतमार्ग निर्माण, रेलमार्ग निर्माणको निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कामहरु अघी बढेका छन् ।
समुद्री सतहले नछोएको नेपालमा पनि पानीजहाजको कुरा अघी बढाइएको छ । यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा नेपाल अब विकासको दृष्टिले निकै अघी बढ्ने क्रममा छ । यस क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरु निर्माणको कार्य गरिरहेका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसँग पनि विशेष समन्वयनकारी भूमीका निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि हामीले केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आवश्यक छलफल गरी उच्चस्तरीय योजनाको साथ राष्ट्र विकासको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार गरेर सोही बमोजिम अघी बढ्नेछौं ।
यसैगरी अब हामीले प्रादेशिक स्तरमा समेत विशेष समन्वयनकारी भूमीका निर्वाह गरी प्रदेश स्तरीय अल्पकालिन र दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाहरु तयार गरी त्यसलाई पूरा गर्नको निम्ति विशेष तवरले भूमीका निर्वाह गर्नेछौं । यसरी हेर्दा सबै योजनाहरुमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमीका निकै महत्वपूर्ण रहनेछ । यसरी हेर्दा हामीले तय गरेका यी सबै योजनाहरु वस्तुपरक, कार्यान्वयन गर्न सकिने र यथार्थ धरातलमा आधारित हुनेछन् ।
नेपाल सरकारसँग तपाईंहरुको अपेक्षा के छ ?
हामीले नेपाल सरकार समक्ष आगामी दशकलाई पूर्वाधार विकास दशकको रुपमा घोषणा गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने बारेमा छलफल गरेर सोही बमोजिम अघी बढ्नेछौं । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका नियमहरुमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले देखेका समृद्धिका सपनाहरु र पूर्वाधार विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नमा हामीले केही व्यवधानहरु रहेको पाएका छौं । साथै हामी ती योजनाहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै सुरक्षित तवरले कार्यान्वयनको दिशामा समेत अघी बढाउनेछौं ।
इन्जिनियरिङलाई उत्तरदायी बनाउनको निम्ति पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ कि ?
स्वभाविक रुपमा इन्जिनियरहरु राष्ट्रको विकास प्रति उत्तरदायी त हुनैपर्छ । इन्जिनियरहरुको त्यस किसिको प्रतिवद्धता बिना कुनै पनि हालतमा मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन ।
हामी नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मार्फत नेपालका विद्वत इन्जिनियरहरुलाई एकै ठाऊँमा जोड्न चाहन्छौं । हामीले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मार्फत सगौरव सबै इन्जिनियरहरुलाई राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा जोड्न सके हाम्रा लक्ष्यहरु पूरा सजिलै पूरा हुन सक्छन् ।
तपाईंहरुको नेतृत्वबाट एसोसिएसनका सदस्यहरुले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
अब हामीले नेतृत्व गर्ने नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका सबै इन्जिनियरहरुको साझा केन्द्र र आशाको धरोहर बन्नेछ । यसको नेतृत्व नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले नै गर्नेछ । यसैगरी अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सबै इन्जिनियरहरुको हक, हितको लागि काम गर्ने सामुहिक छाता संगठन हुनेछ । अब यो संस्थालाई नेपालका अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु निर्धारणको क्रममा उच्चस्तरीय जनशक्ति उपलब्ध गराउने केन्द्रको रुपमा समेत यसलाई अघी ल्याउन हाम्रो नेतृत्व सफल हुनेछ ।
अहिले सम्मका नेतृत्वले सही सदस्यहरुलाई सही दिशा निर्देश गर्न नसक्दा हाम्रो संस्थाबाट इन्जिनियरहरुको सङ्ख्या घटिरहेको छ । यसपटक नवीकरण गर्नेहरु करिब १७ हजार मात्र छन् । अझ करिब ३० हजार इन्जिनियरहरु त नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन भन्दा बाहिर नै छन् । अब हामी ऊहाँहरु सबैलाई जोड्न चाहन्छौं । हामीले सबै इन्जिनियरहरुलाई बुझाउन जरुरी छ कि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नै हाम्रो अभिभावक संस्था हो । मक्का मजिना हो । नेतृत्वले सही काम गर्न नसक्दा निराश हुनुभएका तपाईं सम्पूर्ण साथीहरु अब तपार्इंहरु निराश हुनुपर्ने छैन । अबको नेतृत्वले तपाईंहरुको मुहारमा खुसीयाली छाउनेछ ।
मुलुकको मूल नेतृत्वमा इन्जिनियर लगायत प्राज्ञिक व्यक्तिहरु रहनु कत्तिको आवश्यक छ ?
नेपालका अहिलेको इन्जिनियरहरु निकै नै क्षमतावान् छन् । उनीहरु हरेक क्षेत्रमा सक्षम छन् । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा समेत सक्षम इन्जिनियरहरुको नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ । यसमा एसोसिएसनको अहिले सम्मको नेतृत्व चुकेकै हो । इन्जिनियरहरु कुशल व्यवस्थापक हुन् । विकास र योजनारुपी डुंगाका चालक हुन् । यसकारण नेपालका हेक राजनीतिक दलहरुले अब कुशल क्षमतावान् इन्जिनियरहरुलाई अवसर दिनको निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
अहिलेको निर्वाचन सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो यो चुनाव पेशागत चुनाव हो । हुनतः हामी नेकपा निकट व्यावसायिक संगठन हौं । यद्यपि अहिले सम्मको निर्वाचित कार्यसमितिले विश्वास गुमाएको अवस्थामा हामीले विशेष योजना सहित यस पटक प्रस्तुत हुनुले हामीलाई अझ सहज हुने अवस्था छ ।
राज्य पक्षसँग तपाईंहरुको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
इन्जिनियरहरु स्वभावैले सत्ताको विरुद्ध जान सक्दैनन् । इन्जिनियरहरु सर्जक हुन् । हामी आफैंले बनाएको योजना कार्यान्वयन गरी त्यसलाई सुन्दर वास्तविकतामा बदल्ने काम हामी गर्छाैं । हामी आफैंले निर्माण गरेका संरचनाहरु पुुरानो भएको खण्डमा त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने कार्यमा पनि हामी सक्रिय रहन्छौं ।
साथै राज्य विरुद्ध इन्जिनियरहरु जाँदैनन् भन्नुको मतलब राज्यको अगाडि घुँडा टेक्छन् भन्ने पनि होइन । आफ्ना अधिकार प्राप्तिको निम्ति इन्जिनियरहरुले स्पष्ट रुपमा योजनावद्ध तवरले छलफल गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
तपाईं त जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमीकामा हुनुहुन्छ, अब दुवै तर्फको नेतृत्वमा कसरी आफूलाई सफलतापूर्वक अघी बढाउनुहुन्छ ?
हो, म अहिले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमीकामा छु । मेरो नेतृत्वमा अहिले पनि करिब ११ सय ४ मेघावाट क्षमताका १९ ओटा आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी बार्षिक करिब अघी बढाएका यी आयोजनाबाट कम्पनीले बार्षिक १ अरब रकम बराबरको मुनाफा आर्जन गर्न सफल छ । हामीले यस कम्पनीलाई पनि ५ बर्षको स्पष्ट योजनाको साथ हाम्रा गतिविधिहरु अघी बढाईरहेका छौं । अबको ५ बर्षको अवधिमा हामीले थप ३४ मेघावाट क्षमतामा विभिन्न ३१ ओटा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । यसको लागि थप ३० अरब रकम लगानी गर्ने हामीले योजना बनाएका छौं । यता अहिले चुनावी माहोलमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन यस्तै उद्यमशिल कार्यहरु गर्ने कम्पनीहरुका योजनालाई नेतृत्व गर्ने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले विशेष महत्वाकांक्षी कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा दुवै तर्फका योजनाहरु समेत मिल्दा किसिमका भएको कारण म एकैपटक दुवै तर्फको नेतृत्वमा सफल हुनेछु भन्नेमा दृढ विश्वस्त छु ।